GRIMME: VARITRON 470 ọhụrụ
VARITRON 470 onye na-ewe ihe n'ahịrị anọ nwere ihe ọhụrụ
Ọgbọ nke atọ nke ndị na-ewe ihe ubi VARITRON 470 na-amata ọ bụghị naanị site na imewe ọhụrụ ya, kamakwa site na ọtụtụ ndozi. Ma ụdị igwe nwere wheeled na igwe nwere TERRA TRAC ka emelitere ma a ga-enye ya maka oge owuwe ihe ubi 2023.
VARITRON 470 na-akwado site na igwe 460 hp. na ọkwa ọkwa V
Ọhụụ ọhụrụ ahụ na-eme ka ọ dị mfe ikpokọta na ịkwatu ihe defoliator. Tụkwasị na nke ahụ, a na-amụba ike nke ụgbọala defoliator, nke na-eme ka ọ dị mma nke ukwuu nke na-ebuwanye ibu.
Cylinder dị n'èzí na-arụ ọrụ nke ọma na-eduzi ịdị elu nke defoliator. Ọrụ nchekwa ergonomically dị n'okpuru nke defoliator ga-ekwe omume ekele maka nhazi nhazi nke defoliator na ọnọdụ ọrụ site na-atụgharị ya elu.
Ngwaọrụ egwu egwu zuru ụwa ọnụ
Maka ojiji kwa afọ, VARITRON 470 nwere ike nwee ndị na-egwu ala dị iche iche maka iwe ihe ubi poteto, eyịm na karọt. A pụkwara iji ya mee ihe maka usoro nchịkọta nke abụọ maka eyịm na poteto.
Teknụzụ igwu ala egosipụtara na njirimara ọhụrụ
Site n'enyemaka nke njikwa ọsọ ọsọ na-akpaghị aka Speedtronic-Web, enwere ike ịhazi sieving webs ọ bụghị naanị dị ka ọsọ na-aga n'ihu, kamakwa dabere na ibu ahụ.
Iji kpochapụ ihe mgbochi nwere ike ime, ndị na-ebufe ihe nyocha, igwe mbuli elu na mgbanaka mgbanaka nwere ike tụgharịa iche na nke ọma na-ahapụghị ụgbọ ala ha. Ọ dịkwa ọhụrụ na ntụziaka nke ntụgharị nke ngwaọrụ ndị na-ebuli elu ma ọ bụ ndị na-ebuli elu nwere ike gbanwee. Ha nwere ike ịtụgharị ma n'akụkụ ụzọ ịdọrọ na ọnọdụ njem. Nke a na-enyere VARITRON aka imeziwanye nke ọma maka ihe ọkụkụ dị iche iche yana nsonaazụ nkewa chọrọ.
Ihe ndọtị hopper - bụkwa maka ụdị igwe igwe
VARITRON 470 nwere n'okpuru carriage nwekwara ike ịkwado ya na ndọtị hopper egosipụtara nke 64 cm. Nke a na-eme ka ọ dị mfe ma dị nchebe maka ịkwanye ụgbọ ala na arịa dị ogologo na ahịrị nke abụọ. A na-atụ aro mgbatị bonka maka imepe ubi nwere ogologo ogologo. Na CW nke 75 cm, ụgbọ ala na-ebugharị nwere ike ịkwaga na tramline ma jupụta na-enweghị mfu n'ebe dị anya nke ahịrị anọ site na ngwakọta.
Nkasi obi pụrụ iche
VARITRON 470 ọhụrụ a kwadebere dị ka ọkọlọtọ nwere ogwe njikwa CCI 1200 nwere ihe ngosi 12,1 ″. Elu njikwa ya nwere nghọta na-enye onye ọkwọ ụgbọ ala nkọwa dị mma nke ọrụ igwe niile.
SmartView nwere ihuenyo mmetụ inch 12, mbugharị, Live Slow Motion, nnyefe onyonyo ozugbo Wi-Fi, Visual Protect PRO na ndekọ onyonyo na-enye igwefoto 13 ezigbo nyocha nke ọrụ igwe niile. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume ọbụna karịa ntọala igwe kachasị mma.
Iji detuo ọnụọgụ mkpụrụ, VARITRON 470 nwere ike nwee usoro eserese mkpụrụ agbakwunyere. Dabere na data ndị a, ọ ga-ekwe omume ịchịkọta map ubi na-egosi ebe dị iche iche nwere mpaghara mkpụrụ dị elu na nke dị ala. Iji System Management Information System (FMIS), dabere na map ubi na-egosi ebe mkpụrụ dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ịdepụta map ubi pụrụ iche maka ịgwọ ụfọdụ ebe site na iji ọnụ ọgụgụ fatịlaịza dị mkpa, ngwaahịa nchebe osisi na ihe ọkụkụ.
N'ikwekọ n'usoro iwu dị na obodo a na-eji, VARITON 470 ọhụrụ nwere chassis wheel nwere ike ịkwado maka ọsọ ọsọ ruo 30 km / h.
Ogwe njikwa CCI 1200 na sistemụ vidiyo SmartView na-enye nkọwa zuru oke nke ntọala na ọrụ igwe niile.
Echiche ọkụ ọhụrụ nwere LEDs na-egbuke egbuke na ọkụ ọkụ Ultra-Beam maka ọkụ zuru oke nke ebe ọrụ na mpaghara gburugburu igwe.
Tags: EBUKA 470Ngwa GRIMME
A na-akụ nduku na mpaghara Stavropol
A ga-emepụta mpaghara pụrụ iche maka imepụta poteto mkpụrụ na mpaghara Kostroma